बोङवाजोर घाटमा नुन बेसाएका ती दिनहरू « Naya Page
प्रकाशित मिति : August 18, 2018
सम्बत् ०७१ सालको दशैँपछि यो साल म अलिक छिट्टै काठमाडौँ लागेँ, दशमीको पर्सिपल्ट । काठमाडौँ हुँदा घर जाने बेला घर गएर के—के न गर्छु भनेर चाँडै जाने तर घर पुगेपछि काठमाडौँमा आफ्नो के के न बिते जस्तो हतार गरेर हिँड्ने मेरो पुरानो प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले आजसम्म मैले उत्रो ठूलो क्यै लछारपाटो लाएको भने आफैलाई सम्झना छैन । मान्छेको हतार गर्ने बानी एक बहाना मात्र हो भन्ने मैले धेरैपल्ट बुझेर बुझ पचाएको छु ।
बोङवाजोर घाट पश्चिम—दक्षिण भोजपुर र पूर्वी सुदुर दक्षिण खोटाङको बोङवा खोला दोभान सीमानाको दूधकोशी संगममा शताब्दीअघिदेखि सञ्चालनमा आएको घाट हो ।
यही घाटमा नाउ खियाउँदा खियाउँदै कत्ति माझीहरूको जवानी र जीवन गयो ? दूधकोशी बाहेक कसलाई थाहा होला र ? खियाउने माझीहरू भए पनि अलि पर्तिरका बाठा राई ठेकेदारहरूले दिने पारिश्रमिक र कुनै मनकारी यात्रुको आभारीले जाँड खान दिने पाँच दश रुपियाँको भरमा यी माझीहरू नाउ खियाउँदा खियाउँदै तन्नेरीबाट बुढो भएको मैले नै देखिरहेको छु । हाम्रा गुरु प्राध्यापक माधव पोखरेलले भन्नुभए अनुसार माझीहरू काँसीतिरबाट सप्तकोशी पछ्याउँदै नेपाल आएका थिए भन्ने भाषाको तरङ्गले देखाउँछ । कोशी पछ्याउने क्रममा नै उनीहरू पनि बोङ्वाजोर घाट आसपास बसेका थिए भन्ने कुरामा द्विविधा नहोला ।
कोशी पछ्याउँदा पछ्याउँदै कोशीको उपल्लो भेक तामाकोशी, सुनकोशीको आसपास धेरै माझीहरू बस्न पुगेका भनेर गुरु भन्नुहुन्थ्यो । मैले आफैले देखे अनुसार रामेछाप सदरमुकामको मन्थली बजारपश्चिम तामाकोशी किनारैकिनार माझीहरूको ठूलो बस्ती छ । खिम्तिनेर त माझी गाउँ भनेरै सडक विभागले सूचक बोर्ड ठड्याएको छ । ढोलीखोलामा तिनै माझीले तामाकोशीमा समाएका माछा ल्याएर काठमाडौँमा मैले भान्सा मिठ्याएको पनि छु । तिनै माझीहरूका दाजुभाइले तार्ने नाउको छेउमा आज अघिल्ला कैयौँपल्ट जसरी नै बुङवाजोर घाटमा म उभिएको थिएँ ।
खेवापाथीलाई प्रत्येक चोटि एउटा सिट सुरक्षण गरिने नियम नाउ सञ्चालकहरूको वर्षौँदेखि लगाइआएका थिए । उहिले नगद सुलभ रुपमा प्रचलनमा नआइसकेको समयमा घाट तर्नेहरूले तार्नेहरूलाई वार्षिक रुपमा अन्नपात र चाडवाड भाग दिने चलन थियो
खेवापाथीलाई प्रत्येक चोटि एउटा सिट सुरक्षण गरिने नियम नाउ सञ्चालकहरूको वर्षौँदेखि लगाइआएका थिए । उहिले नगद सुलभ रुपमा प्रचलनमा नआइसकेको समयमा घाट तर्नेहरूले तार्नेहरूलाई वार्षिक रुपमा अन्नपात र चाडवाड भाग दिने चलन थियो । यसैलाई खेवापाथी भनिन्छ । अहिले खेवापाथी चल्ने सबै घाटहरूमा आसपास बस्ने स्थानीयहरूलाई मात्र लागु गरिएको हुन्छ । मैले सोध्दा उनीहरू प्रतिघरधुरी हरेक वर्ष तीन पाथी कोदो घाट सञ्चालकलाई खेवापाथी बुझाउने गरेको बताउँथे ।
खेवा बढेजस्तै खेवापाथी पनि मुठी माना हुँदै तीन पाथीमा आइसकेको थियो । खेवापाथी सुरु भएको बेलाको अञ्जुली र अहिलेको पाथीमा तात्विक फरक छैन । अन्न प्रशस्त नहुने भोकमरीको उहिलेको समयमा मुठीमा पाथी पानी मिसाएर खोले खाएर बाँच्ने जमाना पनि नभोगेका होइनौँ हामीले ।
यो घाटको मेरा आफ्नै स्मरण छन् । आजभन्दा लगभग डेढ दशक अघिदेखि म यो घाटमा हिडँे हुँला । मलाई थाहा भएसम्म यो घाटमा खेवा बाह्रआना (पचहत्तर पैसा) थियो । हुन त मैले जान्दासम्म नै बेल्टारमा ढिके नुनको भाउ पनि प्रति किलो पचहत्तर पैसा नै थियो । यो त्यो बेला थियो, जतिबेला अहिलेको धुलो पाकेटको नुन प्रचलनमा आइसकेको थिएन ।
उतिबेला घाटमा बेल्टार नुन लिन आउनेहरूको ठूलो भीड हुन्थ्यो । सबैले ढाकर बोक्थे । यसरी आउनेहरूमा सोलुखुम्बुतिरका स्थानीयहरू पनि थिए । मैले उतिबेला सोध्दा उनीहरू नौ दिनको नुन यात्रा सम्पन्न गरेर मात्र घर पुगिन्छ भन्थे । मेरो पनि खुट्टामा मासी जवान हुँदै गएपछि बेल्टार नुन लिन ढाकर बोकेर धेरै चोटि झरेँ । कहिले दिदीहरूसँग त कहिले घर पारिको बोजेनी दाइसँग । बोजेनी दाइसँग अधिक चोटि नुन लिन झरेँ । किनकि उनी गाउँका धेरै जनाको नुन बोकिदिन्थे अधियामा । म उनैको पछि लाग्थेँ घरमा मधेसबाट नुन ल्याइपुर्‍याउनका लागि ।
मैले यस्तै टहरो बनाएर ढाकरेको सेवा व्यापार गर्ने युवतीको बयानमा ‘तायाहाङमा’ शीर्षकको कथा लेखेको थिएँ, जुन जनविश्वास साप्ताहिक धनकुटामा छापिएको थियो, रेडियो नेपालको गीतिकथा कार्यक्रममा बान्तावा र नेपाली भाषामा प्रसारित पनि भयो । पछि मैले मेरो दिलाक्लाम कथा सङ्ग्रहको पहिलो कथाको रुपमा किताबमा त्यसलाई छापेँ ।
झन्डै बाह्र वर्ष अगाडि हाम्रै गाउँका अमृतपाल दाइ दीपक बान्तावासित नुन लिन बेल्टार झरेका थिएछन् । उनी अप्राहा मुनिको फाँटिलो बगर रहेको चौतारीमा बिसाएर भेटिएका तासेहरूको हुलमा मिसिएर तास खेल्न थालेछन् । उनले तासमा यति हारेछन् कि गोजीमा कुनै पैसा बाँकी नरहेपछि उतिबेलामा दमवाला सिको फाइभ घडी दुई सयमा मोलेर खेलेछन्, तथापि उनले घडी पनि फिर्ता गर्न सकेनछन्, हारेछन् । उनी उठ्दा उनको साथमा भित्री गोजीमा बडा कष्टले जतन गरिराखेको दुई रुपियाँ मात्र थियो भनी दीपक मलाई बताउँथे । त्यो दुई रुपियाँ अरु नभएर घाट तर्नलाई थियो अरे । यस्ता किंवदन्तीका अनेक पाना बन्ने शृङ्खला अब बुङ्वाजोरघाटमा विस्मृतिमा विलिन हुने तरखर गर्दैछ, र अब त कसले गाउँमा मोटरसाइकल ढिकीमा पार्किङ गर्याे भन्ने शानसौकतको आधुनिक गाथा निर्माण हुन थालेको छ ।
मैले माथि भोजपुर मुनि पिखुवाको उकालो पैयापानीको बाटो पोहोर हतुवाका शिक्षक दिलकुमार राईसँग सबेरै टस बाल्दै ओरालो झर्दा उहिलेको त्यो फराकिलो बाटोमा दिनैपिच्छे कसरी मेला लाग्दो थियो भन्ने गफ गर्दै झरेका थियौँ । पिखुवा किनारमा उहिले बटुवाहरूको दोहोरी खेल्ने गोठ र कटेराहरू जम्मै ढलेका देखिन्थे । ती चौतारा, पाटी र फलैँचाहरू उहिले बसेर गएका बटुवाहरूको चीर स्मरण गर्दै वियोगमा तड्पिबसेको असहाय झैँ देखिन्थे ।
ती सबै बटुवाहरूलाई अहिले हिले—भोजपुरको सडकले कोखमा राखेर गुडाएर लगिसकेको छ । दुङमाको उकालो समी कटेजमा इन्द्र, भुवन, माधव र मैले खाना खाएको धेरै वर्ष भएको छैन, जतिबेला त्यहाँ मानिसहरू कुपन हातमा लिएर भात खान लाइन लाग्थे । अघिल्लो वर्ष दुङमा जाँदा त्यो कटेज नै ढलिसकेको थियो । समीको रुखचाहिँ बढेर पिपल हुन लागेको थियो । सग्लो एउटै थियो, समी कटेज लेखिएको साइनबोर्ड, जो उत्तानो थियो । समी कटेजका मालिक तारा राई पनि पोखरा भासिइन् भन्ने समाचार गाउँलेहरूले दिए ।
बोजेनी दाइको पनि अहिले कुम हलुङ्गो भइसकेको छ । तिनका दुवै छोराले मलेसियामा कमाउन थालेका छन् । जेठा कमलसँग पनि मैले ढाकर बोकेँ । उनी गाउँका प्रधानबाजेको बीस किलो चिनी बोक्थे डोकामा । एकदिन लडेर कोशीपारि ढ्याङग्रे खोलामा तिनको घुँडामा चोट लाग्यो । रगत बग्यो । उनी रुन थाले । उनको पीडा देखेर हाम्रा आँखा ओसिला भएका थिए ।
तिनी पछि पोखरामा निर्माण कार्यको ठेकेदार भए । गाउँमा सबैभन्दा पहिला आफ्नै मोटरसाइकल गुडाएर ल्याउने तिनै कमल भए । तिनले परार गाउँमा सबैभन्दा महङ्गो सत्तरी हजारमा लैनो भैँसी बाउलाई किनिदिएर मलेसिया उडे । तिनलाई म जैले भेट्दा पनि स्याब्बास् भतिज भनेर अँगालो मार्छु । तिनले बाउलाई फुर्सद दिएकामा उनका बाउ पछि म नै बढी खुशी हुन्छु, आखिर सोकोपेको उकालोमा भारी बिसाएर काँक्राजस्तै करेला ताछि खाएको हामीले नै त थियो ।
ती सबै बटुवाहरूलाई अहिले हिले—भोजपुरको सडकले कोखमा राखेर गुडाएर लगिसकेको छ । दुङमाको उकालो समी कटेजमा इन्द्र, भुवन, माधव र मैले खाना खाएको धेरै वर्ष भएको छैन
खोटाङको चिसापानी, चखेवाभञ्ज्याङ, मूलडाँडा, सीमानाको पान्धारेमा छ पाङ्ग्रे मोटर कुध्न थालेपछि बाटोको ढुङ्गालाई चिप्लिने गरी टेकेर हिँडेका बोङ्वाजोर घाटबाट एक युग हिँडेका बटुवाहरू वेपत्ता भइ गएका छन् । नुन बेल्टारमा होइन, अहिले ट्याक्टरको थाप्लामा आँगनमै हाजिर छ बोरामा, पहाडी गाउँहरूमा ।
तरकारीमा नुन चर्को भएको दिन ‘बेल्टार नजिक भएछ’ भन्ने उखान अब कल्ले गर्ला र खै ? मोटरबाटोले कसरी खकन—तोक्माहरू गाउँलेहरूले बिसाएर एक जुगको स्मरण गरिरहेका छन् भन्ने बारे मैले ‘हर्कुमानेले भारी बिसायो’ भन्ने कथा बान्तावा भाषामा लेखेको छु, जुन दिलाक्लाम कथासंग्रहमा छापिएको छ । म जस्ता गाउँको भुक्तभोगीले लेख्ने कथा त्यस्तै हुन् जस्तो लाग्छ, र लेख्न बस्दा आफ्नै कथा लेखेजस्तो नअड्किकन मेलो सर्छ । वास्तवमा मैले लेख्ने हरेक कथा मेरो जीवनको परोक्ष नै पनि कसरी रहन सक्ला र ?
झन्डै बाह्र वर्ष अगाडि हाम्रै गाउँका अमृतपाल दाइ दीपक बान्तावासित नुन लिन बेल्टार झरेका थिएछन् । उनी अप्राहा मुनिको फाँटिलो बगर रहेको चौतारीमा बिसाएर भेटिएका तासेहरूको हुलमा मिसिएर तास खेल्न थालेछन् । उनले तासमा यति हारेछन् कि गोजीमा कुनै पैसा बाँकी नरहेपछि उतिबेलामा दमवाला सिको फाइभ घडी दुई सयमा मोलेर खेलेछन्, तथापि उनले घडी पनि फिर्ता गर्न सकेनछन्, हारेछन् । उनी उठ्दा उनको साथमा भित्री गोजीमा बडा कष्टले जतन गरिराखेको दुई रुपियाँ मात्र थियो भनी दीपक मलाई बताउँथे । त्यो दुई रुपियाँ अरु नभएर घाट तर्नलाई थियो अरे । यस्ता किंवदन्तीका अनेक पाना बन्ने शृङ्खला अब बुङ्वाजोरघाटमा विस्मृतिमा विलिन हुने तरखर गर्दैछ, र अब त कसले गाउँमा मोटरसाइकल ढिकीमा पार्किङ ग¥यो भन्ने शानसौकतको आधुनिक गाथा निर्माण हुन थालेको छ ।